अलपत्र कामदारकाे प्रश्न : सरकार ! पैसा नहुनेले विदेशमै मर्नु ? « Kakharaa
३ मंसिर, काठमाडौं । धरानका जीवन कटुवाल मलेसियामा चार वर्षदेखि अवैध रूपमा काम गर्दै आएका छन् । कोरोना भाइरसका कारण गत साउनदेखि उनी स्वदेश फर्कन बाटो कुरिरहेका छन् ।
सरकारले उद्धार गर्छ भनेर चार महिनादेखि बाटो कुरेर बसेकाे सामाजिक सञ्जालमार्फत कटुवालले जानकारी दिए । ‘कोरोना महामारी फैलिएसँगै नेपाल फर्कन सातामा एक पटक कहिले नेपाल जान पाइन्छ भनेर नेपाली दूतावासमा सोध्न पुग्छु । तर, दूतावासले आगामी साता भनेकाे चार महिना भयाे,’ उनले भने, ‘मलेसियाबाट फर्किनलाई साथमा पैसा छैन । सरकारले फर्काउँछ भनेर पर्खिरहेको हुँ । अवैध भएर बसेका कारण मलेसियाली प्रहरीले जति बेला पनि पक्रिने डर छ ।’
कटुवालले नेपाल फर्कन नपाए मलेसियामा पुनः अवैध भएर काम गर्ने बताए । सरकारले उद्धार नगरे फेरि मलेसियाकै रोजगारदाता कम्पनीमा भागेर काम गर्ने सोचिरहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, कतारमा भोजपुरका दिलराज राई पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । राईसँग स्वदेश फर्किने पैसा नभएका कारण उनी पनि चार महिनादेखि नेपाल फर्कन पाएका छैनन् । उनी पनि काेराेनाकै कारण रोजगार गुमेपछि फर्किने पैसा नहुँदा कतारमै अलपत्र भएर बसेका हुन् ।
‘सरकारले उद्धार गरेन भने कतारमै मरिएलाजस्तो छ । अहिलेसम्म कम्पनी र साथीभाइले दयाले खान र बस्न दिइरहेका छन् । सात महिनादेखि कम्पनीले तलबसमेत दिएन्,’ उनले भने, ‘कतारमा राेजगारीका लागि आउँदा लागेकाे ऋण नै तिर्ने सकेको छैन । कम्पनीले तलब र स्वदेश फर्किने टिकट नदिँदा अलपत्र भएर बस्नुपरेको छ । सरकारले उद्धार गर्छ भन्ने आस थियो । अब त त्यो पनि हराउँदै गयो ।’
कोरोनाका कारण दसैँतिहारमा कतारमै अलपत्र परेर बस्नुपरेको उनको गुनासो छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदार कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेर भोकभोकै बस्दासमेत सरकारले उद्धार गर्न चासो नदेखाएको उनको आरोप छ ।
यसैगरी, काभ्रेका यमकुमार क्षत्री यूएईमा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेर अलपत्र बनेर बसेका छन् । उनी तीन महिनादेखि सरकारले उद्धार गर्छ कि भनेर पर्खिएरै बसेका छन् ।
‘रोजगारी गुमेपछि कम्पनीले दिएको सानो कोठामा बसेको छु । स्वदेश फर्किन साथमा पैसा छैन । सरकारले उद्धार गरेन भने यतै मरिन्छ कि ?,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण रोजगारी गयो । नेपाल फर्कन पैसा छैन । सरकारले उद्धार गर्दैन । यूएईमा रहेको दूतावास धाउँदा-धाउँदा वाक्क लागिसक्यो ।’
कटुवाल, राई र क्षत्रीजस्तै कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका धेरै कामदार उद्धारकाे प्रतीक्षामा छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका धेरै कामदार स्वदेश फर्किने पैसा नभएकाले सरकारी उद्धारको प्रतीक्षामा छन् । हाल विभिन्न देशमा काेराेनाका कारण रोजगारी गुमेका करिब ७० हजार कामदार फर्काउन बाँकी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकाे भनाइ छ ।
उद्धार निर्देशिका गैरजिम्मेवार
सरकारले गत साउनमा विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ ल्याएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गर्ने निर्देशिका पारित गरेको थियो । उद्धार निर्देशिका ल्याए पनि विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार भने गरेको छैन ।
सरकारले त्यस्ता कामदारकाे उद्धार गर्न ल्याइएको निर्देशिकाअनुसार काम नभएको रोजगारविज्ञको आरोप छ । कोरोनाका कारण रोजगार गन्तव्य देशमा अलपत्र परेका कामदारप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेको रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँँछन् । भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले जम्मा गरेको पैसाले तिनै समस्या परेका श्रमिककाे उद्धार गर्न सरकारलाई किन गाह्रो भएको छ ?’
कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले हाल गर्दै आएको उद्धारकार्य सकिएको भन्दै सबै देशबाट उद्धार उडान रोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । विदेशमा बेखर्ची भई अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार नगर्दै सरकारले उद्धार उडान रोक्दा उनीहरू झनै समस्यामा पर्ने देखिन्छ । उद्धार निर्देशिका जारी गरे पनि सरकारले कल्याणकारी कोषको पैसा खर्च गरेर कामदारको उद्धारमा चासो नदेखाएको श्रमिकको गुनासो छ ।
उद्धार भइरहेको छ : दूतावासहरू
कोरोनाका कारण अलपत्र परेका कामदारको समस्या हेरेर उद्धार भइरहेको विभिन्न देशका दूतावासहरूले दाबी गरेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेका कामदारलाई उद्धार उडानमार्फत पठाइरहेको मलेसियास्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले बताए । कोरोनाका कारण समस्यामा परेका कामदार केन्द्रित भएर दूतावासले उद्धार गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, यूएईस्थित नेपाली दूतावासले पनि कोरोनाका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेका कामदारको उद्धार गरिरहेको जनाएको छ । यूएईमा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र अन्य समस्यामा परेका नेपालीलाई दूतावासले उद्धार विमानमार्फत स्वदेश फकाइरहेको दूतावासका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले बताए ।
यसैगरी, कतारस्थित नेपाली दूतावासले पनि कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदारको उद्धार भइरहेको जानकारी दिएको छ । कतारमा कोरोना भाइरसका कारण अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार उडानमार्फत समय मिलाएर उद्धार भइरहेको राजदूत नारदराज वाग्लेले जानकारी दिए । उनले नेपाल फर्कन नपाएका नेपालीको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए ।
सरकारी खर्चमा १ सय ५६ कामदारको उद्धार
कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का अनुसार २५ कात्तिकसम्ममा १ लाख ३९ हजार नेपाली कोरोनाका कारण स्वदेश फर्किएका छन् । यसरी फर्किएका अधिकांश सरकारी नभई निजी खर्चमा फर्किएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार हालसम्म कल्याणकारी कोषको रकममार्फत १ सय ५६ जना कामदारकाे उद्धार गरिएको छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार मलेसियाबाट ८६, बहराइनबाट १८ र यूएईबाट ५२ जनाको निःशुल्क उद्धार गरिएको हो । सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका विभिन्न ६० मुलुकबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्काइरहेको छ ।
यस्तै, सरकारले गत जेठ महिनायता यूएईबाट ४० हजार ४ सय १० जना, कतारबाट २६ हजार ७ सय ९० जना, मलेसियाबाट १८ हजार ८ सय २० जना, कुवेतबाट १० हजार ४ सय ८२ जना, साउदी अरबको रियाद र जेद्दाबाट १८ हजार ७ सय ६० जना, ओमानबाट १ हजार ७ सय ८४ जना, जापानबाट ३ हजार ९ सय ९२ जना र टर्कीबाट ३ हजार ५ सय ३९ जनाको उद्धार गरेको छ ।